Torolalana Fanoratana volana Janoary: Andeha Hankalaza ny Fiainana sy ny Asan’i David Bowie amin’ny sioka · Global Voices teny Malagasy
Torolalana Fanoratana volana Janoary: Andeha Hankalaza ny Fiainana sy ny Asan'i David Bowie amin'ny sioka
Voadika ny 28 Septambra 2019 7:25 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy tamin'ny janoary 2016)
David Bowie nandritra ny fampisehoana tany Chicago tamin'ny taona 2008. Sary nalain'i Adam Bielawski avy ao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Ny Torohevitra fanoratana isan-kerinandro dia fitambarana fomba fanao tsara indrindra amin'ny fanoratana sy fitantarana ato amin'ny Global Voices. Hoentin'i Amira, tonian-dahatsoratra ho an'ny Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra aminao ny toro-hevitra volana Janoary.
Momba ny sioka fotsiny ny toro-hevitra fanoratana amin'ity herinandro ity. Ny ifantohan'ny fampiharantsika dia ny fankalazana ny fiainana sy ny asan'ilay mpihira Anglisy, David Bowie, izay maty teo amin'ny faha-69 taonany taorian'ny ady tamin'ny homamiadan'ny voa. Mamaritra an'i Bowie ho toy ny “iray amin'ireo mpiangaly mozika be mpitia indrindra tamin'ny androny” ny BBC. Betsaka tao amin'ny Twitter no nizara izany fihetseham-po izany ary nandefa sioka tamin'ny fo hatramin'ny nanambaran'ny fianakaviany ny vaovao tao amin'ny kaonty media sosialy ofisialin'ny mpihira, anisan'izany ny Twitter:
10 Janoary 2016 – Maty am-pilaminana androany i David Bowie, nohodidinin'ny fianakaviany taorian'ny ady feno herim-po naharitra 18 volana …
Tiako ny mampiasa sioka amin'ny lahatsoratra satria manome fomba fijery midadasika ho ahy avy amin'ny tontolon'ny fiarahamonina isan-karazany.
Inona avy ny torolàlan'ny GV amin'ny fampiasana sioka?
Araka ny torolàlana momba ny Endrika Fanoratanay:
Tsy mametraka fetra ho an'ny isan'ny sioka isaky ny lahatsoratra ny GV, saingy manoro hevitra izahay mba tsy hihoatra ny 8-10 izany. Aza mametraka sioka mba hanehoana tenirohy fotsiny. Fa apetraho ao amin'ny lahatsoratra ny tenirohy.
Zava-dehibe ny tsy fanitsakitsahana ny zon'ny olon-drehetra amin'ny tsiambaratelo ao amin'ny sioka notsongaina. Aza manonona avy amin'ny kaonty Twitter-n'olon-tsotra. Aza adinoina fa afaka misoroka izany ny Storify.
Tokony tsy mitonona anarana ny sioka sasany mba hiarovana ny mpisera Twitter voakasika. Amin'ireo tranga ireo dia andramo ny manolotra votoaty raha tsy hisy fiantraikany amin'ilay mpiserasera izany. Ohatra:
@anon_China, mpisera Twitter tsy fantatra anarana avy any amin'ny faritany Kunming, China, nisioka tamin'ny zoma 18 martsa:
Ahitana zavatra betsaka ny torolalantsika momba ny fandefasana sioka:
Manatsofoka sioka avy amin'ny Twitter.com
Amin'ny ankapobeny, ny fomba tsara indrindra hanatsingana sioka iray dia ny fampiasana kaody embed avy amin'ny Twitter:
Mijery ny sioka ao amin'ny Twitter.com
Manindry ambonin'ny sioka ary manendry ny bokotra “•••more”.
Misafidy ny “Embed” ary mandika ny HTML mipongatra.
Manindry ambonin'ny hihy “Text” ao amin'ny paositra ao amin'ny WordPress, mametaka ny embed HTML ao amin'ny fanoratan-dahatsoratra.
Mariho: Tsy mety ao amin'ny fanoratan-dahatsoratra WorPress “Visual” io. Tsy maintsy mampiasa ny fanoratan-dahatsoratra “Text” ianao rehefa hanatsofoka ireo sioka.
Mametraka an-tanana ny tsongan-tsioka
Raha manapa-kevitra ianao noho ny antony samihafa fa tsy hampiasa ny kaody hita ao amin'ny Twitter, dia tokony farananao amin'ny <blockquote> ny lahatsoratra sioka ary hamarino fa manana ireto singa manaraka ireto izy:
Ny anaran'ny mpisera Twitter mifandrohy mankany amin'ny horirantavany.
Ny lahatsoratra feno amin'ny sioka, ao anatin'izany ny rohy rehetra.
Raha misy fanononana mpisera hafa ao amin'ny sioka, ampifandraiso amin'ny mpisera Twitter mifandraika amin'izany.
Aza manatsofoka pikantsarin'ny sioka mihitsy ao anaty lahatsoratra
Toa vahaolana tsotra ny pikantsary amin'ny sioka, saingy ahitana lesoka marobe izay tsy azo ekena, anisan'izany ny hoe saro-bakian'ny olona tsy ampy fahitana izy ireo ary sarotra ho an'ny mpandika teny ny mitantana azy ireo. Aza ampiasaina mihitsy azafady ny pikantsary rehefa manatsinga zavatra avy amin'ny Twitter ianao.
Mandika teny sioka
Rehefa tsy mitovy amin'ny fiteny amin'ny lahatsoratrao ny sioka, dia ampidiro fotsiny ny blockquote fandika-teny (<blockquote class='translation’>) aorian'ny sioka misy kaody (<blockquote>). Jereo ny fizarana #Translation_Quotes amin'ity tahirin-kevitra ity raha mila ny antsipiriany sy ny toro-hevitra amin'ny fampiasana azy ireo.
Ny votoatin'ny sioka ihany no adika. Efa hita ao anatin'ny sioka orizinaly ny rohy, ny daty sy ny anarana fisera.
Aza mandika ny kaody fampidirana sioka mihitsy. Mampidira “translation blockquote” vaovao ho an'ny lahatsoratra voadika
Aza mandika tenirohy
Raha mila mampiditra fanamarihan'ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny fandikan-teninao ianao (ohatra: mba hanazava fanafohezan-teny), farano amin'ny fango sosona efajoro izany ([…])
Tiako indrindra ny maro aminareo mba handray anjara amin'ireo sioka amin'ny lahatsoratra fahatsiarovana, izay hosoratantsika miaraka aminy. Ny tanjona dia ny hanangona fanehoan-kevitra isan-karazany manerantany, ho fankalazana ny sangan'asan'i Bowie. […]
Misaotra anao ary amin'ny herinandro manaraka indray miaraka amin'ny fampahatsiahivana vaovao momba ny toro-hevitra fanoratana.
21 ora izayCivic Media Observatory